XZ680A boribory fandavahana torolàlana marindrano dia manana savaivony mamelombelona indrindra 1000mm, hery manosika fatratra 725kN, tselatra 31000N · m, ary lanja milanja 21t.
Ny rafitra XZ680A HDD dia mandray chassis mandady. Izy io dia mampiasa ny rafitra famonoana herinaratra mihidy, miharo fifehezana elektro-hydraulic, ny fahatsapana ny lanjany mandroso ary ny teknikan'ny patanty XCMG. Ny famaritana ara-teknika lehibe indrindra dia mahatratra ny ambaratonga avo any Sina. Ny singa lehibe indrindra amin'ny rafitra hydraulic, ny fandefasana, ny rafitra elektrika ary ny boaty dia vita tamin'ny vokatra marika kilasy voalohany, fampisehoana tsara, fahamendrehana tsara.
Endri-javatra fampidirana XZ680A HDD
1.Ny bandy sy ny pinion dia manosika sy misintona, ny fandefasana dia marin-toerana ary azo itokisana, ary mitsingevana ny spindle lohan'ny herinaratra mba hampitomboana ny androm-piainan'ny kofehy fantsona.
2.Ny teknolojia famoahana ny lanjan'ny elastika dia ny fisorohana ny fahasimban'ny fitaovana rehefa misintona ny fantsom-pifandraisana ianao, izay mampitombo ny fahamendrehana.
3.Ny rafitra mandeha an-tongotra tariby dia mahatonga ny fivezivezena azo antoka.
4.Ny lalàna mifehy ny hafainganam-pandeha tsy misy dingana mamonjy fotaka sy mampihena ny fandotoana.
5.Ny fihodinan'ny 45 ° Cap dia manatsara ny fandidiana ahazoana aina.
Sina dingana III 、 EU Stage IIIA
6LTAA8.9-C325 Sina dingana II
vatofantsika XZ680A.06Ⅱ Vatofantsika malalaka
XZ680A.06 Vatofantsika tery
Pipeloader semi-mandeha ho azy
miditra tsimoramora AMCA
Crane Lorry XCMG
Mpandeha haingam-pandeha mandeha Korea Doosan
Ny milina XZ680A HDD dia manomboka rehefa miaraka amin'ny lisitra fanangonana, ampidiro ireto antontan-taratasy teknika manaraka ireto:
Fanamarinana momba ny vokatra / Boky Torolàlana / Famaritana ny motera / Fanamafisam-peo ho an'ny fiara fitaterana ankapobeny
Boky torolàlana momba ny asa sy fikojakojana ny boky torolàlana momba ny Loader Crane / Pump Pump
Teo aloha: XZ450Plus rig ary atsofohy rig
Manaraka: XZ1000A familiana fandavahana torolàlana
fitaovana fandavahana lavaka
Rore fandavahana borehole
milina fandavahana hdd, milina fandavahana lavaka, Rig ary atsofohy amin'ny familiana, hdd rig,